डिप्रेसनको खतरा कम गर्छ ओखरले - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
अध्ययनअनुसार ओखर खाँदा शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुनुका साथै एक्लोपनबाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ । अध्ययनमा २६ हजारभन्दा बढी युवालाई सहभागी गराइएको थियो । ओखरको सेवनले क्यान्सरलगायत मुटुसम्बन्धी रोगको खतरा पनि कम गर्न मद्दत गर्छ ।
यसको सेवनले कोलस्ट्रोल पनि कम हुन्छ । हरेक दिन ७५ ग्राम ओखर सेवन गर्दा फुरुषमा शुक्राणु, जीवन शत्ति तथा गतिशीलतामा समेत सुधार आउने बताइन्छ ।
श्रावण २६, २०७४ - मसाजले के गर्छ ?
श्रावण १६, २०७४ - मसाजले के गर्छ ?
चैत्र ८, २०७३ - एन्टिबायोटिक्सबाट मधुमेहको खतरा
पुस १९, २०७३ - चियाले कम गर्छ स्मरणशक्ति